ⓘ ဂျီဆူး (အဆိုတော်၊ ၁၉၉၅ မွေးဖွား)
1.1. အတ္ထုပ္ပတ္တိ ငယ် ဘဝ
ကင်မ် ဂျီဆူးကို ၁၉၉၅၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃ရက်နေ့တွင် ဂန်ပို, ဂျောင်ဂျီခရိုင်, တောင်ကိုရီးယား တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမတွင် အကိုတစ်ယောက်နှင့် အမတစ်ယောက် ရှိသည်။ ဂျီဆူးသည် အထက်တန်းပညာအဆင့်ကို ဆိုးလ်ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာ ကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
1.2. အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂၀၁၁–၂၀၁၆; Career beginngings and Blackpink debut
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သူမသည် YG Entertainment တွင် အသံစစ်ဆေးမှုအောင်မြင်ပြီး သင်တန်းသားအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဂျီဆူး သည် KBS2 ဒရာမာဖြစ်သော The Producers တွင် 2NE1 မှSandara Park နှင့် Winner မှ Kang Seung-yoon တို့နှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဂျီဆူး သည် သရုပ်ဆောင် လီမင်ဟို နှင့်အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော Samsonite ကြော်ငြာ အပါအဝင် Smart Uniform, LG Electronics နှင့် Nikon တို့နှင့် ကြော်ငြာအမြောက်အများ ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
ဂျီဆူး သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် Blackpink ၏အဖွဲ့ဝင်လေးဦးထဲတွင် စတင်ပါဝင်လာခဲ့ပြီး အဖွဲ့ထဲတွင် အသက်အကြီးဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။
1.3. အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂၀၁၇ - လက်ရှိ ; Solo endeavors and acting
၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်မှ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်အထိ ဂျီဆူး သည် Got7 မှ Jin-young နှင့် NCT မှ Doyoung တို့နှင့်အတူ Inkigayo သို့ MC အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်တွင်တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော tvN ၏ Arthdal Chronicles ဒရာမာ၏ အခန်းအနည်းငယ်တွင် ဂျီဆူး ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဩဂုတ်လ ၁၈ ရက်တွင် YG Entertainment မှ ဂျီဆူး သည် JDBC ဒရာမာ Snowdrop မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး သူမအတွက် ပထမဆုံး ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာမှ သရုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
2.1. Other ventures Endorsements
၂၀၁၈ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် ဂျီဆူး နှင့် Rosé တို့သည် တောင်ကိုရီးယားအလှကုန်အမှတ်တံဆိပ် Kiss Me အတွက် မော်ဒယ်များဖြစ်လာသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဂျီဆူး သည် Dior အလှကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ "Dior Beauty", Local Ambassador ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လတွင် ဂျီဆူး သည် Dior ၏ အလှကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
2.2. Other ventures Impact and influence
Gallup Korea ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ဂီတဆိုင်ရာ နှစ်စဉ်စစ်တမ်းတွင် ဂျီဆူး သည် မဲ ၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းရရှိပြီးတောင်ကိုရီးယားတွင် ဆယ်ယောက်မြောက် ထင်ပေါ်‌ကျော်ကြားသူ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ဧပြီလတွင် သူမသည် Instagram ပေါ်ရှိ K-pop idol များအနက် ဆယ်ယောက်မြောက် Follower အများဆုံးဖြစ်ပြီး Followers ၁၂.၈ သန်း ရှိသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဂျီဆူး သည် တောင်ကိုရီးယား စစ်မှုထမ်းဥပဒေ အရ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် စစ်သားများကို ကောက်ယူသော နာမည်ကျော် ကေပေါ့ပ်အမျိုးသမီးများ စာရင်းတွင်လည်း အဆင့်၆ နေရာတွင် ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သူမ သည် Bessinussoffashion.com မှ ရွေးချယ်သော BoF 500 တွင်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ဂျီဆူး သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ ပထမငါးလအတွက်အလှကုန်ကမ္ဘာတွင် ဦးဆောင်နေသည့် ထိပ်တန်းအကျော်အမော်ဆယ်ဦး နှင့်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသူတို့တွင်ပါဝင်သည်။ "Bible of fashion" အမည်ဖြင့် ဖက်ရှင်လုပ်ငန်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်နေသော ဂျာနယ်ဖြစ်သည့် Womens Wear Daily မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဂျီဆူး သည် ပိုစ့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် လူအများကြားရောက်ရှိမှုတွင် ဦးဆောင်နေပြီး Rihanna နှင့် Kylie Jenner တို့က ဂျီဆူး၏နောက်တွင် ရပ်တည်နေသည်။ သူမသည် စုစုပေါင်းအဆင့်တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ အဆင့် ၇ တွင်ရှိပြီး သူမအကြောင်းအရာပါသော ပို့စ်သည် ၁၂ ခုသာရှိသည်။ သူမသည် ထိုစာရင်းတွင်ပါဝင်သည့် တစ်ဦးတည်းသော Asian ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လတွင် ဂျီဆူး သည် Blackpink ၏ Comeback သီချင်းဖြစ်သော" How You Like That” Teaser မှ သူမ၏ အလှအပကြောင့် Viral ဖြစ်သွားသည်။ Celebraties နှင့် Influencers များ၊ အထူးသဖြင့် တောင်ကိုရီးယား၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများတွင် ဂျီဆူး ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသော" Two-bow hairstyle” နှင့်"Makeup"ကို ပြန်လည် ဖန်တီးမှုများ ခေတ်စားခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လည်း ပျံ့နှံ့သွားပြီးလူအများအား copycat ပုံစံ ဖန်တီးရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Trend သည် နွေဦးရာသီတလျှောက်လုံး ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လတွင် Jisoo သည် အားကစားသမား Cristiano Ronaldo နှင့်အတူ ဂျာမန်အားကစားကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် Adidas ကို အကြီးမားဆုံး ရောင်းအားမြှင့်တင်ပေးသူတစ်ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။
Wikipedia: ဂျီဆူး (အဆိုတော်၊ ၁၉၉၅ မွေးဖွား)